နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ – Alinyaung
ကျွန်တော် အရမ်းအားကျမိတဲ့ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး ပညာရှင် မဝေသစ်လွင်
April 20, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ကျွန်တော် အရမ်းအားကျမိတဲ့ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး ပညာရှင် မဝေသစ်လွင် မဝေသစ်လွင်အကြောင်း ရေးဖို့တွေးနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ ခုတော့ အကယ်ဒမီပေးပွဲရဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပိုလူသိများလာလို့ ရေးဖို့ သတိရသွားတာပါ။ သူ့ကို အရမ်းအားကျမိတယ်ဆို လွန်တယ် မထင်ပါနဲ့။ သူဟာ အသက်၂၈နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အသက်သိပ်မကွာတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး […]
ကြက်သီးထလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ် ပိုက်သင်ကျေးရွာက ဦးကျော်သိန်း+ဒေါ်ခင်ဝင်းတို့အလှူ
April 10, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဘုရားပြုပြင်ရန် သိန်း၁၀၀၀ မတည်လိုက်သည့် ဘုရားဒကာ အလှူရှင် ဇနီးမောင်နံ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ သိန်း၁၀၀၀ လှူတယ်ဆိုလို့မြို့က သူဌေးကြီး လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့….. တောတောင် ထဲ မှာကိုယ်တိုင် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး၁၇ ဧက ကျယ်တဲ့မြေနေရာမှာသနပ်ခါးပင်တွေစိုက်ကြားမှာ သီးညှပ်စိုက်ပြီးရိုးသားစွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့တောသူတောင်သားဦးကျော်သိန်း+ဒေါ်ခင်ဝင်းတို့ပေါ့ဗျာ…. မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ် ပိုက်သင်ကျေးရွာရှေးဟောင်းဘုရားပြုပြင်ရန်အတွက်ဆိုပြီးသိန်း၁၀၀၀ လှူဒါန်းတာပါ… ။ မွန်မြတ်တဲ့ ဒါန စေတနာဖြစ်ပါတယ […]
ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီးအကြောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ ရင်တွင်းစကား
April 9, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
Via : ဆရာတင်ညွန့် ၊ ဟိန်း ညက NHK သတင်းတွေကြည့်ရင်း ဘာသွားတွေ့လိုက်သလဲဆိုတော့ ဟိုဆေး မူဂျီကာကိုပါ။ ဂျပန်ကို လာပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ဟောပြောပို့ချနေတာလေး ကြည့်လိုက်ရပြီး စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ သူ့အကြောင်း ယခင်ကတည်းကလည်း ဖတ်ထားဖူးတာ။ သူက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က ဥရူဂွေးနိုင်ငံမှာ သမ္မတဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ […]
ရုရှားသမ္မတ ပူတင် ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ကားများရိုက်နေတာလား?
April 2, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး…ပူတင်က ရေငုပ်သဘောင်္ အသေးစားလေးနဲ့ ခရိုင်းမီးယားကို အလည်သွားတာပါ…..ရုရှားတွေရဲ့ နည်းပညာကတော့ အမေရိကန် နဲ့ယှဉ်လို့ရနေပြီနော်
ဘုရင့်နောင်ရဲ့ အင်ပါယာကြီး အချိန်တိုအတွင်းပြိုကွဲခဲ့ရသော အကြောင်းများ-
April 1, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဘုရင့်နောင် သည် ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံကို အောင်မြင်စွာ ထူထောင်ခဲ့ပြီး သူ၏လက်ထက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည်တန်ခိုးအထွားဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။သို့သော် သူ့ကို ဆက်ခံသော သားတော် နန္ဒဘုရင်လက်ထက်တွင် မူ ဘုရင့်နောင် ၏ အင်ပါယာကြီးမှာ ပြိုကွဲပျက်စီးခဲ့ရလေသည်။ထိုမင်းသည် မအောင်မြင်သည့် ယိုးဒယားစစ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ချီစေခြင်းဖြင့် မိမိအင်အားကို ဖြုန်းပစ်ခြင်း ၊လက်အောက်ခံဘုရင်များကို နိုင်နင်းစွာ မထိမ်းသိမ်း နိုင်ခြင်း […]
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆုရအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လယ်သမားမိသားစုမှ ကောင်လေး
ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေဟာ ဥာဏ်ကောင်းတာနဲ့ နာမည်ကြီးကြပါတယ်။ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီနဲ့ အခြေအနေမှာတောင် သူတို့ဘယ်လောက်တော်ပြီး ကြိုးစားကြလည်းဆိုတာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ပညာရေးက အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာသင်ကြားရေးဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာထက် စည်းစိမ်တစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ နွမ်းပါးတဲ့အခြေခံလူတန်းစားမိသားစုက ကလေးငယ်တွေဆိုရင် ရေးတတ် ဖတ်တတ်ဖို့ အခြေခံလေ့လာရဖို့တောင် မနည်းကြိုးစားကြရရှာတာပါ။ အခုဖြစ်ရပ်လေးကတော့ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ပြီး အသက်မွေးတဲ့ […]
သမိုင်းတစ်လျှောက် မြန်မာ့သမ္မတများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
March 31, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
၁။ စဝ်ရွှေသိုက် (၁၈၉၄-၁၉၆၂) စဝ်ရွှေသိုက်သည် ရှမ်းလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသမ္မတနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေ၏ နောက်ဆုံးစော်ဘွား (သို့မဟုတ်) မျိုးရိုးအရ မင်းသားဖြစ်သည်။ စဝ်ရွှေသိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဇန်နဝါရီလ လွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်နေ့မှ စတင်၍ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနှင့်အတူ ဦးဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ သမ္မတမဖြစ်မီက စဝ်ရွှေသိုက်သည် ဗြိတိသျှစစ်တပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ […]
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကြောင်းပါဝင်လာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက အလယ်တန်းဖတ်စာအုပ်”
March 29, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဂျပန်နိုင်ငံက အလယ်တန်းအဆင့်ဖတ်စာအုပ်မွာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အေကြာင်းကို ထည့်သွင်းပြဠာန်းခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးမြင့်မားလွ ဂျပန်နိုင်ငံဟာဆိုရင် နိုင်ငံတကာအသိအမွတ်ပြုရ သင်ရိုးညှန်းတမ်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အလယ်တန်းအဆင့်မွာတော့ ကမ္ဘာ့ကြော်အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်ျမားကို ယွဉ်တွဲဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီထဲမွာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အခြားငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ရွင်တွေဖြစ်တဲ့ နယ်ဆင်မင်ဒဲလား၊ ဝမ်ဂါရီမာသိုင်း၊ အိုဘားမာ၊ မာသာထရေဇာတို့နဲ့အတူ နွိုင်းယွဉ်ဖော်ပြခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ Nagoya-shi, Aichi, […]
ပရဟိတအလုပ်တွေ အတူတူလုပ်ဖို့ တိုင်ပင်ခဲ့ကြတဲ့ ဝေဠုကျော်နဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
March 27, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ ဝေဠုကျော်နဲ့ ခိုင်နှင်းဝေတို့ ပရဟိတသမားနှစ်ယောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် တွေ့ဆုံပြီး စကားပြောနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို Ye’MinZaw အကောင့်မှာ သူတို့နှစ်ဦးဘာတွေများ တိုင်ပင်နေကြလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့အတူ တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပုံလေးတွေခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ အကောင့်မှာ ပြန်ရှဲထားပြီး ယခုလို စာလေးကိုလည်း ရေးသားထားပါတယ်။ “ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ကျွန်မတို့ပရဟိတမောင်နှမ […]